सरकार बिग्रियो, संस्कार पनि बिग्रियो
२६ माघ २०७४
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले मुख्यसचिव छँदाछँदै फिलिपिन्सस्थित एशियाली विकास बैंकमा उपकार्यकारी निर्देशकको जागिर रोजेपछि राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री छोटो समयका लागि रिक्त पदमा नियुक्त भए । गत कात्तिक ८ मा ५८ वर्षे उमेरहद लागेर अवकास पाएपछि लोकदर्शन रेग्मी सो पदमा बहाली भएका हुन् । राजेन्द्रकिशोर आजकल गान्धी ल फर्ममा भेटिन्छन्, जुन अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवाभन्दा १० घर पर छ । कारण हो, उनी कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्ति ।… विस्तृत समाचार
​श्रीमती र प्रेमिकाले त्यहाँ पनि पाएका छन्
१४ माघ २०७४
रानी शर्मा, राजपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, प्रदेश २ की सांसद बोलाइँदा ‘रानी शर्मा’ भनिए पनि रानीकुमारी तिवारी हो, औपचारिक नाम । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय विभागमा कर्मचारी थिइन् । तर, राजनीतिमा लागेको नशाले जागिर छोड्ने अवस्थामा पु¥यायो । ०७० कै संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक उम्मेदवार थिइन् । तर, छानिनेमा परिनन् । यसपटक प्रतिनिधिसभामा महन्थ ठाकुरले जितेको महोत्तरी क्षेत्र नं. ३ को प्रदेशसभा २ मा बाट ७ हजार… विस्तृत समाचार
​जिन्दगीमा यस्तो पनि हुन्छ कहीं ?
२८ पौष २०७४
राजेन्द्र महतो, अध्यक्ष मण्डल, राष्ट्रिय जनता पार्टी संसदमा राष्ट्रिय दलको हैसियतले उपस्थित हुने पाँचमध्ये पाँचौ दलको हैसियतमा छ, राष्ट्रिय जनता पार्टी । तराई आन्दोलनको जगमा बनेको उक्त दलले वैधानिक रुपमा दलीय हैसियत त बनाएको छ, तर प्राविधिक रुपमा अझै पनि दल बन्न सकिरहेको छैन । साना मधेसकेन्द्रित दललाई मिलाएर बनेको उक्त पार्टीलाई अहिले पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमले चुनौति दिइरहेको छ । यही पार्टीको अध्यक्ष… विस्तृत समाचार
​सम्माननीयज्यूले आफ्नै साथीबाट सिक्नु पर्दैन ?
२४ पौष २०७४
रविनारायण खनाल, वरिष्ठ अधिवक्ता÷पूर्वअध्यक्ष–संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च संविधान छ, तर त्यसमाथि अनेकन प्रश्न र व्याख्या गरिएका छन् । संविधानको अन्योलतालाई निरूपण गर्ने निकाय सर्वोच्च अदालत हो । तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू सर्वोच्चलाई सोध्ने वा व्याख्या गराउने कामबाट पन्छिँदा प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभापछि अगाडि बढ्ने विधिका सन्दर्भमा अन्योल र विवाद देखिएको छ । संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूको संगठन संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष रविनारायण खनाल कतिपय सन्दर्भ… विस्तृत समाचार
​उहाँलाई राष्ट्रपति बनाउने चर्चा थियो
दुर्गा पौडेल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रिय जनमोर्चा नेकपा (मसाल) को खुला मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष र पार्टी प्रवक्ता पनि हुन् दुर्गा पौडेल । तर, मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहकी पत्नीको नामले बढी चिनिन्छिन् । यसचोटि एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको प्यूठानबाट वामगठबन्धनको उम्मदवार थिइन् । नेपाली कांग्रेसका डा.गोविन्द पोखरेललाई १६ हजारको मतान्तरसाथ पराजित गरिन् । एमाल र माओवादी केन्द्रको स्थानीय नतृत्वसमेत उनको पक्षमा निक्कै जोडसँग लाग्यो … विस्तृत समाचार
कांग्रेसमा पैसा खाएर क–कसले टिकट बेचे ?
३ मङ्सिर २०७४
सुशीलमान शेरचन, महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस (वीपी) बामगठबन्धनले त्यसै पनि पातलिएको नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको संघारमा केही नेता बाहिरिएर अर्को पार्टी गठन गरेका छन्, नेपाली कांग्रेस (वीपी) । कांग्रेसका पुराना नेता तथा पञ्चायतकालीन काठमाडौं नगरपञ्चायतका प्रधानपञ्च हरिबोल भट्टराईको नेतृत्वमा गठन भएर निर्वाचनमा भाग लिइरहेको उक्त पार्टीका महामन्त्री हुन्, सुशीलमान शेरचन । कुनै बेला वीपीका दाहिने हात मानिने शहीद योगेन्द्रमान शेरचनका छोरा । उनी ०५१… विस्तृत समाचार
३१ भाद्र २०७४
सोनमछिरिङ शेर्पा, महामन्त्री, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम मधेस र हिमाली क्षेत्रको समस्या नै भएको छ, चर्को जातिवादी नारा । तुलनात्मक रूपमा हिमाली क्षेत्रमा मधेसमा जत्तिको विकृत राजनीति छैन । तर, आङकाजी शेर्पाप्रवृत्तिका केही पात्रले हिमाली भेगको राजनीतिलाई विदेशी दाताकहाँ सुुम्पिने अस्त्र बनाएका छन् । त्यो धारलाई निरन्तर चुनौती दिँदै आएका व्यक्ति हुन्, सोनमछिरिङ शेर्पा । शेरबहादुर देउवा नेविसंघ सभापति हुँदाका केन्द्रीय सदस्य थिए । तर, राजनीतिलाई… विस्तृत समाचार
आफ्ना नेताको आची पनि ओहो बास्नादार ?
२४ भाद्र २०७४
धनराज गुरुङ, कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङ नेपाली कांग्रेसका त्यस्ता सांसद हुन्, जो विरोधीका विरुद्धमात्र हैन, आफ्ना नेता र पार्टीमा विकसित प्रबृत्तिविरुद्ध बोल्न डराउँदैनन् । ०३६ सालदेखि राजनीतिमा लागेका उनी ०५३ मा नेविसंघ सभापति, ०५४ मा तरुण दलका महामन्त्रीहुँदै स्याङ्जा कांग्रेसका विभिन्न पदमा उनी सक्रिय छन् । समानुपातिकतर्फका सांसद हुन् । उनी संसदको लेखा समितिका सदस्य हुन् । एनसेलको बहुचर्चित कर घोटाला प्रकरणदेखि अहिले आयल निगमबाट… विस्तृत समाचार
मैले भन्नु बोली खेर फाल्नु मात्रै हो
१६ भाद्र २०७४
चन्द्र भण्डारी, सांसद तथा कांग्रेस नेता देउवा सरकार इतिहासकै सबभन्दा जम्बो हुने नै भयो । मुलुकलाई आर्थिकसहितका अनगिन्ती भार थोपर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विरोध स्वयं नेपाली कांग्रेस र देउवा खेमाभित्र बढ्दो छ । पार्टी एउटै भएर पनि मानिसबीचका मनहरु फरक फरक हुँदा बेहाल स्थितिबाट गुज्रिएको नेपाली कांग्रेसभित्र चन्द्र भण्डारी त्यस्तै परिस्थितिले पीडामा परेका नेता हुन् । सरकारले प्रदेश ५ टुक्र्याउने गरी ल्याएको संविधान संशोधन… विस्तृत समाचार
​हिसाब हातहातमा लिएर हिँडेका छन्
८ भाद्र २०७४
बालानन्द पौडेल, पूर्वसचिव, अध्यक्ष– स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग मुख्यसचिव हुने बेला सरकारी रवैया आफू प्रतिकूल भएपछि ०६९ सालमा राजीनामा दिएका बालानन्द पौडेललाई सरकारले त्यसपछि पनि कामहरु लगाइरह्यो । अर्थात्, हालै दुई चरणमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनका लागि तह पुनःसंरचना आयोगको अध्यक्ष उनै थिए । उनी वा शंकर कोइरालामध्येबाट मुख्यसचिव हुनुपर्ने बेलामा लीलामणि पौडेल हावी भएपछि फेरि सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय नहुने गरी जागिरबाट आफैँ बिदा भएका… विस्तृत समाचार